Ma cayaari doonan xiddigaha reer Brazil ee Alisson, Fabinho & Roberto Firmino kulanka Liverpool Vs Leeds? - Iftiin FM
Ma cayaari doonan xiddigaha reer Brazil ee Alisson, Fabinho & Roberto Firmino kulanka Liverpool Vs Leeds?
by Iftiin FM Reporter September 10, 2021
Macalinka naadiga Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa sheegay in uuna hubin in ay xiddigaha reer Brazil ee Alisson, Fabinho & Roberto Firmino Ciyaari doonaan kulanka leeds United ee Axada.
Macali Jurgen Klopp ayaa si xoogan u dhaleeceeyay xidhiidhka koonfu America kadib qaabkii ay ula dhaqmeen xaalada iyada oo kooxaa Man United, Man City, Chelsea iyo Liverpool saamayn weyn ku yeelan doonto.
Kooxda Liverpool oo ka hadashay Christopher Nkunku.
Naadiga Liverpool ayaa xiddigeheeda Alisson, Fabinho iyo Firmino u diiday in ay aadaan waajibaadka xulalkooda sabab la xidhiidha xanuunka Korona laakiin xidhiidhka FA-ga Brazil ayaa ganaax dusha ka saaray xiddigihii aan aadin waajibaadka xulalkooda.
Naadiga Liverpool ayaa ah kooxda uu sida weyn u saamayn doono ganaaxu marka la eego in 3-da xiddig ee reer Brazil laf dhabar u yihiin kooxda Jurgen Klopp.
Xiddigaha ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee UEFA oo la shaaciyey.
Wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ee cayaartooyda.
Markii wax laga weydiiyay in ay xiddigaha kooxdiisu ka qayb qaadan doonaan kulanka Leeds ayuu Klopp yidhi”Waxaan dhihi karaa waxaan ogahay: Ma aqaano waqtigaan. Waan arki doonaa, waxaa jira shirar socda”.
Guddiga dooroshooyinka oo baaq u diray dowladda Kenya.
Ugu yaraan 3.5 Milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya oo macluul u soo wajahay.
Maxakamadda Garissa oo 25 sano ku xukuntay Nin dil geystay .